I-Aquabliss Beach House.Iimbono zolwandle ezitshayelayo.
Masithembe ukuba i-NSW iza kuvulelwa abahambi kungekudala! I-Aquabliss isemantla ijongene nemibono etshayelayo yeBoomerang Beach. Ukuhamba kancinci ukuya kwiilwandle, iivenkile kunye neekhefi. Lo mmandla uchazwa ngamanzi kwaye yiparadesi yabathandi bendalo ezele ziihambo zosapho ezinobuhlobo kunye neembono ezimangalisayo. Le ndawo intle yonxweme ingumdibaniso wonxweme olugqibeleleyo, amachibi aqaqambileyo, iiPaki zeSizwe, ukusefa okuchukumisayo kunye neekhefi ezinkulu.
Kukho i-smart lock kumnyango wangaphambili ukuze ungabi naxhala ngokuqokelela izitshixo. I-WiFi yasimahla.
I-Aquabliss yindlu yokulala e-3 ekhangayo, i-2 yokuhlambela indlu yase-beach apho ungaphumla kwaye ujabulele ukuzola kwendawo yasePacific Palms.Ingakwazi ukuhlalisa abantu abadala be-4 kunye nabantwana be-4 okanye abantu abadala abayi-6. Inemibono etshayelayo emantla ngaphaya kweBoomerang Beach kwaye inendawo enkulu, esanda kulungiswa, negalelwe lilanga apho unokujonga khona i-BBQ kwaye ungene kwindawo entle erhangqekileyo. Ikwanayo nekhitshi elisandula ukulungiswa kunye negumbi lokulala elitsha elifakwe iithayile. Ixesha elininzi linokuchithwa kwibalcony ubukele ii dolphin kunye neminenga idlula ngelixa kuselwa kwiglasi epholileyo yewayini.
Indlu eselunxwemeni ibekwe kwindawo ekumantla eemitha nje ukusuka eBoomerang naseBlueys Beaches, iindawo ezi-2 ezidume kakhulu kwi-surf. Yindlela elula yokuya ezivenkileni, kwiivenkile zokutyela nakwiivenkile zokutyela.
Iimpawu ziquka imbonakalo elunxwemeni, indawo yokuphumla, indawo yokutyela kunye nekhitshi evuleleke kwi-sundeck ene-BBQ ejonge kwisanti kunye ne-surf. Ikhitshi ine-microwave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Inenkqubo yeTV/DVD zombini phezulu kwigumbi lokuhlala nasezantsi kwigumbi lerumpus.
Inendlu yokulala eyi-1 enebhedi ephindwe kabini kunye negumbi le-2 elineebhedi ezimbini ezingamawele phezulu nasezantsi kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebhedi enkulu. ishawa kunye nendlu yangasese.
Ezantsi kukho igumbi le-rumpus elinebhedi yesofa. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa abantwana ngeTV kunye nenkqubo yeDVD. Kukho indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuvasa, iayini kunye nebhodi yokuayina.
Nceda uze nalakho amashiti i-queen set enye, i-double set enye neeseti ezimbini zamawele kunye neetawuli. Ilinen kunye neetawuli zinokuqeshwa kumashishini asekuhlaleni.
Ineyadi evaliweyo yegadi eneshawa yoqalo yangaphandle ebekwe emthunzini wemithi.
Iyakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-6 yabantu abadala okanye i-4 yabantu abadala kunye nabantwana aba-4 okanye indawo yothando egqibeleleyo kuwe kunye nomntu okhethekileyo.
Eli khaya lonwabileyo leholide linayo yonke - indawo ebalaseleyo, indawo esemantla egqibeleleyo, ilanga, isanti kunye nokujonga amanzi kunye neemitha nje ukusuka kwi-surfing enomtsalane kolunye lolona lwandle lubalaseleyo lwaseOstreliya. Le yindawo enokuhamba kakhulu. Ungahamba ngokulula ukuya kwiilwandle zolwandle, iiresityu, iikhefi kunye neevenkile.
4.84 ·Izimvo eziyi-108
4.84 · Izimvo eziyi-108
Ummandla ekubhekiselwa kuwo njengePasifiki yePalms uchazwa ngamanzi kwaye yiparadesi yabathandi bendalo ezele luhambo olunobuhlobo kusapho kunye neziganeko ezimangalisayo. Lo mmandla umhle wonxweme ngumxube wamanxweme afanelekileyo, amachibi akhazimlayo, iipaki zelizwe, imbonakalo entle, ihlathi elibanzi, iikhefi ezinkulu ezibonelela ngeekofu ezimangalisayo kunye neendawo ezininzi ezinomdla zokuthenga nokutya.
Imitsalane ethile iquka:-
Ime kumantla ePasifiki yePalms, iElizabeth Beach lunxweme olugadiweyo. Zombini iilwandle zibonelela ngokuqubha okukhuselweyo kwaye iimpahla zaseShelly Beach azikhethelwanga ukuze ukwazi ukuqubha kunye nokutshiswa lilanga okanye ngokwendalo ukuba oko kukuthanda kwakho. Lo mmandla ujikelezwe yiBooti Booti National Park ebonelela ngeengoma zokuhamba ezichukumisayo kunye nezona mbono zibalaseleyo kulo mmandla.
Olona lwandle lubalaseleyo lokusefa lwePacific Palm olunemigangatho yamatye enceda ukwenza amaza amakhulu. Idlala ngokusingatha ukhuphiswano oluninzi lokusefa kwaye ingumtsalane wabasefa. Ulwandle lumile njenge "boomerang" kwaye lufanelekile ukuqubha ngokukhuselwa kwimimoya egqubayo nakweyiphina isiphelo. Kwakhona lulwandle olugadiweyo ngexesha leeholide olubonelela ngokuqubha okukhuselekileyo kumntu wonke.
Ecaleni kweBoomerang Beach kukho iBlueys Beach enye ilwandle olugqibeleleyo lokusefa kunye nokuqubha. Akukho patroli elwandle eBlueys.
Ime phakathi kweWallis kunye namachibi aseMyall kwaye inika amanzi ashushu, azolileyo ahlulwe elwandle ngokwenziwa kwesanti. Yindawo efanelekileyo yokuqubha, intlanzi, i-kayak, isikhephe, ukutyibiliza okanye ukuqasha isikhephe kunye nokubheqa. Izikhephe zokuloba kunye nejet skis nazo zivumelekile.
I-Seal Rocks yindawo encinci, eyozelayo, eyodwa, nelali yokuloba eneembono ezintle. Kukuhambo lwemizuzu eli-10 emazantsi eBoomerang Beach. Kukho iinketho zolwandle ezilungele bonke kwaye ukuntywila kugqwesile kwaye yenye yeendawo ezimbalwa zokubona ookrebe abangwevu.Isibane saseSugarloaf Point luhambo olufutshane olunika iimbono eziphefumlayo.
Yilali encinci kumda weWallis Lakes kumbindi weForster kunye nePasifiki yePalms. Imbonakalo-mhlaba ilawulwa ziindunduma zesanti kunxweme lweemayile ezisi-7, ipaki yeSizwe yaseBooti Booti kunye neWallis Lakes. Ngaselunxwemeni kukho iindawo zokuhamba ezintle kunye neendawo zokufikelela kwizikhephe kunye nabathanda ukuhamba ngeenqanawa.
Ime kwincam yoMntla weGreat Lakes, ezi dolophu zimbini kulapho iWallis Lake idibana khona nolwandle. Iidolophu zijikelezwe ziiPaki zeSizwe, iindawo eziphambili kunye nolwandle olubanzi. Imisebenzi ibandakanya ukuhamba ngesikhephe, ukuloba, ukuntywila, ukuhamba ngenqanawa kunye nokubukela iminenga kunye nehlengesi. Ikwabonelela ngamava okuthenga awodwa kunye neendawo zokutyela ezininzi eziphumelele ibhaso. Kukuhamba ngemizuzu engama-20 ukuya emantla ePasifiki yePalms.
Imisebenzi yi-diving engapheliyo, i-snorkelling, ukuloba, ukusefa, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukuhamba emahlathini, i-4WD, igalufa, ukukhwela ihashe, ihlengesi kunye nokubukela umnenga, ukukhwela amachibi athuleyo njengoko ilanga litshona okanye ukuphumla nje kumgangatho ongasentla wepropathi kunye nebhiya ebandayo yomkhenkce. Yeyona ndawo igqibeleleyo yokurhoxa.
I-Pacific Palms idume ngokusefa iilwandle kunye neelwandle ezininzi onokukhetha kuzo kusoloko kukho amaza okuya (Iwebhusayithi efihlwe ngu-Airbnb) ikwalikhaya lolona khuphiswano lukhulu lokusefa kunye nokusindisa ubomi eState.
Idume njengendawo yokuloba yabantu abathanda ukuloba. Unokucwangcisa ukuya kwi-charter enzulu yolwandle, uqeshe isikhephe okanye uzame inhlanhla yakho kwiindawo ezininzi zolwandle, ilitye kunye nechibi "iindawo zokuloba". Intloko kaCharlotte idume ngokuloba kwayo kunye ne-Anglers inkampu ngaphandle apho ukubamba ityhuna eluhlaza okwesibhakabhaka kunye intlanzi yokumkani.
Eminye imisebenzi yasemanzini iquka:- ukuntywila, ukukhwela isikhephe, ukubhexa, ukhuphiswano lokuqubha kunye nokubukela iminenga namahlengesi.
Iintende zePasifiki zinemizila yehlathi kunye nemida emide yolwandle ilungele ukuhlola i-4WD. Chitha usuku kwi-sandbar yokuqubha, ukuloba kunye nokuhamba ngesikhephe. Njengoko ilanga litshona kukhanyisa umlilo kwaye ubukele i-pelicans isondla ngelixa iphunga kwiglasi yamaqamza.
Bush & Beach uhamba
iingoma zokuhamba kunye neendledlana zilungele zonke izakhono ukusuka kumngeni wohambo lwaselunxwemeni ukuya kwiindlela ezintle zasechibini. Kukho iimbono ezimangalisayo zeendawo ezahlukeneyo zomhlaba. Into ekufuneka yenziwe nguWhoota Whoota ojonge eWallingat National Park. Ukusuka kule ndawo iphakamileyo ungabona amachibi amakhulu kunye neenkqubo zawo zemilambo kunye nembono emangalisayo elwandle.
Ukukhwela ibhayisekile kunye nokukhwela ibhayisekile eNtabeni
Zininzi iindlela eziqengqelekayo kunye nengoma ecela umngeni kunye nokukhwela ezindleleni ukugcina intliziyo yakho ibaleka kunye nokumpompa igazi.
Ngaphakathi kweentende zePasifiki kunye neeLwandle eziMkhulu kukho iivenkile ze-quirky zakudala kunye nempahla yasekhaya, iigalari zobugcisa kunye nezobugcisa, iivenkile ze-surf kunye namathuba amaninzi okuthengisa.
Zininzi iimarike kule ndawo kodwa ekufuneka yenziwe yintengiso yePasifiki yePalms kwiLakes Way rhoqo ngeCawe yokugqibela yenyanga. Iimarike zibonisa umgangatho wemveliso eyenziwe ngezandla, yasekhaya kunye neemveliso ezibhakwa ekhaya. Izitali ezimibalabala ziquka ubucwebe, ubugcisa, ubugcisa, iimpahla, amakhandlela, izityalo, imifuno kunye neemveliso zomzimba ezihlaziyayo.
Uluhlu olubanzi lweendawo zokutyela ezintle kodwa kufuneka uzive ukutshona kwelanga ngasechibini kwiKlabhu yezoLonwabo yasePasifiki apho unokonwabela isidlo sangokuhlwa kunye neglasi yewayini.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1761